mubvunzo CLS DC-10-30F Review
2 makore 4 ago - 2 makore 4 ago #195 by Gh0stRider203
Handingarevi nhema, ndiri kukuchidzira of 3 injini shiri. Nguva dzose kunge. Muenderere KASHOMA Me kuona chinhu nezvishoma pane 2 injini.
Uyu shiri akanaka chaizvo. anouya aine zvakawanda liveries, chaizvoizvo vakanaka akadzama, rinopindura kukuru asi pane zvishoma ane dambudziko nayo ...
Unoonaka, Max-siyana pamusoro shiri iyi rwakaiswa 6,600 mi; Max Fuel kuchitaurwa sezvo 36,650 US VaG; uye naMax kutora-kure uremu kuchitaurwa sezvo 572,000 LBS.
Asi, kana iwe vanotarira FSX ... zvinoratidza Max kwakakomba uremu sezvo 558,000lbs uye naMax zvinobvumidzwa mafuta sezvo 32,368 marita, mutsauko pakati 4,282 marita.
Right zvino ndiri kuita 6305.0 nm ndege, uye ndiri pasi 7% kuruboshwe. Ndanga cruising pana Mach .82 (ndiro hwokufananidzira rwendo nokukurumidza) pa 35,000 tsoka, uye akatora azere Matangi kure. Hatigoni kutaura ... I haisi gonna kuti vasara 4.5 til W / o kuva kuti wedzera ....
Ndakagara messaged CLS kuona kana zvavari vachiziva izvi, uye ndiri iye akamirira kunzwa musana.
Ko akaita ILS nzira asi (kwete kushandiswa autopilot ichi elnaz zviri neIkoniyumu yakasiyana lol), asi ini havatarisiri kuti kuva zvakaoma kuita.
Saka kure zvazvo .... ndingadai kupa shiri iyi yakanaka A- (hongu vakachinja pfungwa dzangu lol). Pandakangotanga kuisa mumwe kubva pano Thomas Ruth, ndichaisa kukwira kudzokorora nomusi mumwe elnaz kungava zuva kana kuti ini Kashoma kuita zvishoma pane imwe Max-siyana ndege kana totaura nhumbi
Last edit: 2 years 4 months ago by Gh0stRider203.
2 makore 3 ago #199 by Gh0stRider203
ILS iri nokuita pamusoro shiri iyi, kuvonga. Ichokwadi Ndakashandisa kiibhodhi kunotoda, asi achiri elnaz Asi haana kumupindura CLS ....